0 Monday January 13, 2020 - 12:06:28
Malaayiin qof Iiraaniyiin ah ayaa dibad baxyo waaweyn ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee wadankaas waxayna dibad baxyadooda ugasoo horjeedaan hoggaanka wadanka maamula.
0 Sunday January 12, 2020 - 10:57:47
0 Sunday January 12, 2020 - 10:22:55
0 Saturday January 11, 2020 - 20:07:35
0 Saturday January 11, 2020 - 09:08:13
0 Thursday January 09, 2020 - 14:07:07
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in farriimo nabadeed ay ka heshay maamulka Shiiciga Iiraan saacado kadib markii duqeymo ba'an ay lakulmeen saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq.
0 Wednesday January 08, 2020 - 11:13:05
Boqolaal qof ayaa dhintay kadib markii diyaarad rakaab ah ay ku burburtay meel ku dhow magaalada Dahraan ee caasimadda u ah wadanka Iiraan.
0 Wednesday January 08, 2020 - 09:24:56
50 Qof Shiico ah oo dhintay xilli ay ka qeyb gelayeen Aaska Jeneraal Suleymaani.
0 Tuesday January 07, 2020 - 20:37:13
Ugu yaraan 50 qof ayaa dhimatay tobanaan kalane dhaawcyo ayaa soo gaaray kadib markii ay isbuurteen dad mushrikiin shiico rawaafid ah xilli ay sagootinayeen Meydka Qaasim Suleymaani oo ahaa Jeneraal lafdhabar u ahaa dagaalka dowladda shiicada iiraan ay kula jirto muslimiinta sunniga ah.
0 Tuesday January 07, 2020 - 11:24:53
Dagaallo culus ayaa ka qarxay magaalada Sirta oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Liibiya ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika.
0 Saturday January 04, 2020 - 12:33:13
0 Friday January 03, 2020 - 11:26:55
Duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga magaalada Baqdaad ayaa sababtay dhimashada Jeneraal sare oo katirsanaa melleteriga dowladda Shiicada Iiraan.
0 Thursday January 02, 2020 - 19:27:52
Kadib kulan magaalada Anqara ay ku yeesheen Xildhibaannada baarlamaanka dowladda Turkiga ayay ku meel mariyeen qaraar dhigaya in ciidamo Turki ah loo daad gureeyo wadanka Liibiya.
0 Wednesday January 01, 2020 - 15:04:55
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Shiicada iyo taageerayaashoodu ay isaga baxeen hareeraha dhismaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad oo shalay ay qabsadeen.
0 Tuesday December 31, 2019 - 15:44:04
0 Tuesday December 31, 2019 - 12:46:03
Xukuumadda dabadhilifka Suudaan ayaa xirtay dhammaan warbaahintii Islaamiga aheyd ee faafinta Dacwada Islaamka ka wadday wadankaasi.
0 Monday December 30, 2019 - 12:07:23
Jamaaco Jihaadi ah oo 11 Askari ku dishay Weerar ka dhacay Burkina Faso.
0 Monday December 30, 2019 - 11:49:41
Jamaacada Ugargaaridda islaamka iyo Muslimiinta ayaa qaadday weeraro hor leh oo lagu laayay ciidamo katirsan dowladda dabadhilifka Burkina Faso oo qeyb ka ah isbahaysiga G5 ee duullaanka ku qaaday wadanka Maali.
Hoggaamiyihii Maleeshiyaadka Shiicada Alfaadimiyuun oo u dhintay dhaawac kusoo gaaray Suuriya.
0 Sunday December 29, 2019 - 08:31:09
Mid kamida dagaal oogayaashii ugu caansanaa ee gummaadka ku hayay shacabka wadanka Suuriya ayaa ku geeriyooday gudaha wadanka Iiraan.
0 Sunday December 29, 2019 - 08:12:20
0 Saturday December 28, 2019 - 06:41:56
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in Jeneraal Howlgab American ah lagu dilay weerar madaafiic loo adeegsaday oo lagu qaaday saldhig kuyaal waqooyiga magaalada Baqdaad.
0 Wednesday December 25, 2019 - 16:13:20
0 Wednesday December 25, 2019 - 15:09:55
Ciidanka Ruushka iyo kuwa Nidaamka Al Asad oo guluf dagaaleed hor leh ku qaaday Gobolka Idlib.
0 Tuesday December 24, 2019 - 12:51:04
Tobanaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo bahalnimo oo diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa nidaamka Bishaar Al-Asad ay ka geysteen waqooyiga wadanka Suuriya.
0 Monday December 23, 2019 - 20:34:31
0 Monday December 23, 2019 - 19:30:44
Xeer ilaalinta guud ee dowladda Aala Sacuud ayaa ku dhawaaqday in lasoo gaba gabeeyay maxkamadeynta dadkii ku eedaysnaa in ay mas'uul ka ahaayeen dilkii sanadkii hore magaalada Istanbul loogu geystay Wariye Jamaal Khaashuqji.
0 Monday December 23, 2019 - 12:02:49
Mareykamka oo xaqiijiyay in hal askari looga dilay Weerar gaadma ah oo ka dhacay Afghanistan.
0 Monday December 23, 2019 - 08:29:01
Khasaara xooggan ayaa ciidamada Mareykanka iyo kuwa xukuumadda Afghanistan kasoo gaaray weerar uga yimid dagaalyahannada Jihaadiga Taliban.
Shaqaale Shiinays ah oo lagu qafaashay Wadanka Gaaboon ee Galbeedka Afrika.
0 Monday December 23, 2019 - 08:11:46
Wararka ka imaanaya wadanka Gabon ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay weerar lagu qafaashay shaqaale Ajaanib ah kuwa kalane lagu dilay.
0 Saturday December 21, 2019 - 18:57:55
0 Saturday December 21, 2019 - 14:03:22
Dowladda Turkiga oo qorshaynaysa in ay ciidamo udirto wadanka Liibiya,
0 Saturday December 21, 2019 - 11:29:59
Xukuumadda Alwifaaq ee fadhigeedu yahay magaalada Daraabulis ee caasimadda dalka Liibiya ayaa qeylla dhaansi gurmad weydiisasho ah udirtay waxa loogu yeero beesha caalamka si looga badbaadiyo guluf dagaaleedka Khaliifa Xaftar.
0 Friday December 20, 2019 - 15:54:17
Barnaamijka diirada jimcaha oo ah barnaamij Todobaadle ah ayaa maanta waxaa ka qeybgalay Aqoonyahanada kala ah Cabdullaahi Maxamed,Cabdullaahi Cadceed,Abuu Cubayd.Ugaas Ibraahim Maxamed Nuur iyo Cilmi Xuseen.
Kooxda Boko Haram oo Weerar dad badan ku dhinteen ka fulisay Wadanka Jaad.
0 Thursday December 19, 2019 - 10:58:40
Tobanaan qof ayaa ku dhimatay weerar ay kooxo hubeysan ku qaadeen wadanka Jaad oo kamid ah wadamada dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
« Prev1 ... 45678910 ... 41Next »